ठुँची, प्रेमबहादुर र प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले भनिरहेका छन्- यो भावुक हुने समय होइन। तर दुई छाक खानै मुस्किल भएर लकडाउन पालना गर्न नसकेका नागरिकको दुःख वालुवाटारबा... बिहीबार, वैशाख ४, २०७७
एक मजदुरको प्रश्न : सरकार म कहाँ जाउँ त? प्रधानमन्त्रीले कोही भोकै मर्नु पर्दैन भनेर भाषण गरेको पनि नारायणले सुनेका छैनन्। महानगरका बाँदर र कुकुरलाई खानेकुरा बाँड्दै हिँडेका... आइतबार, चैत ३०, २०७६
सम्झनामा लेकसाइडको एक रात [फोटो फिचर] लेकसाइड राति आठ बजेतिर ब्यूझन्छ। दिनभर स्थिर देखिएको सहर रातमा नै ककटेल बनेर चलायमान हुन्छ। हिन्दी चलचित्रको ‘तेरे मेरे बीचमे’ देखि... शनिबार, चैत २९, २०७६
यो देश हो? धनगढीमा कोरोना भाइरसका एक संक्रमितसहित एकैदिन तीन संक्रमित थपिएर नौं जना संक्रमित पुगे भन्ने समाचारपछि पत्रिकाका डिजिटल भित्ताहरु पन... बिहीबार, चैत २७, २०७६
फुटबलमा फर्किएको उल्लास बुधबार, माघ ७, २०७७